Momba anay - Quanzhou Omi Apparel Co., Ltd.
Quanzhou Omi Apparel Co., Ltd dia natsangana tamin'ny taona 2008 mba hanohanana ny mpanjifa mihamaro hatrany manerantany. Amin'ny maha orinasa mpanamboatra ho an'ny fanatanjahan-tena mitazona, dia nitazona tombony hatry ny ela, traikefa voangona sy mahavariana amin'ny vokatra R&D, orinasa mpamokatra entana, serivisy ho an'ny mpanjifa ary fanaraha-maso kalitao izahay.
Miaraka amin'ny fanoloran-tenanay amin'ny kalitaon'ny vokatra, ny asa-tanana ary ny fanatsarana ny fizotrantsika, dia kendrenay ny hahatonga ny fizotran'ny fanamboarana akanjo manontolo ho traikefa mora, mahafinaritra ary tsy misy olana amin'ny mpanjifa.
Amin'ny alàlan'ny kolontsainay, ny fiara ary ny fahaizan'ny mpiasa tsirairay avy dia manana toerana miavaka izahay hanome serivisy tsara indrindra ho an'ny mpanjifa manerantany.
Mba ho orinasa mahatakatra tsara sy manome fahafaham-po ny vokatra, serivisy ary filan'ny marika lamaody-manerantany
Mba hanomezana tontolo iasana tsara izay entanin'ny aingam-panahy ny olona hamboly sy hanome ny tsara indrindra
Ho mpiara-miasa azo antoka sy manampy mihoatra ny andrasana
Mamokatra vokatra mifanaraka amin'ny anton'ny kalitaon'ny mpanjifanay sy ny mpanjifany
Mikolokolo tambajotra mpiara-miasa ary manangana fifankatiavana
Hamarino fa ny mpiara-miasa aminay dia manome karama ara-drariny sy tontolo iainana azo antoka
Ho mpiara-miasa azo antoka amin'ny alàlan'ny fihazonana ny soatoavin'ny fahamarinana sy ny fiarovana ny IP an'ny mpanjifanay
Manana mpiasa matihanina amin'ny R&D, Teknolojia, famokarana ary serivisy izahay. Ekipa iray manana fampidirana matanjaka izay miasa mankany amin'ny tanjona tokana izahay: hanomezana ny mpanjifantsika tolotra tokana tsotsotra tsy amin'ny alàlan'ny fanohanan'ny teknolojia matihanina fotsiny fa koa ny tsy fivadihana sy ny finamanana.
Manam-pahaizana manokana izahay amin'ny akanjo mavitrika, akanjo atletika ary akanjo ivelany. Ny vokatray dia nifantoka tamin'ny fanangonana premium sy fanaovana spaoro miasa. Toy ny hazakazaka mihazakazaka, akanjo mitazona, yoga ary fitafiana fanatanjahan-tena, mitaingina bisikileta ary palitao ririnina any ivelany, izay asongadin'ny rivotra, UV-proof ary maina vetivety. Mandritra izany fotoana izany, eo am-pamoronana lamba vaovao miaraka amin'ny fitaovana ara-tontolo iainana, R-PET izahay, izay mahatonga anay hifaninana sy hiavaka kokoa.
Nanjary nifaninana bebe kokoa izahay tamin'ny alàlan'ny fampidirana ny rojom-panomezana, tsy vitan'ny fampandrosoana sy ny famokarana avy amina orinasa mpamokatra anatiny, koa ny fifandraisana akaiky amin'ireo ozinina sy mpivarotra tena tsara any amin'ny tanibe Shina, Taiwan ary ireo firenena aziatika, izay manam-pahaizana manokana amin'ny karazana fanatanjahan-tena rehetra.